समाजवादीबाट को–को बन्दैछन् मन्त्री ? « Drishti News – Nepalese News Portal
समाजवादीबाट को–को बन्दैछन् मन्त्री ?
२२ भाद्र २०७८, मंगलबार 8:25 am
काठमाडौं । अन्ततः शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन भएको डेढ महिनाको प्रतीक्षापछि शुक्रबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने भएको छ । प्रत्येक साता मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी र चर्चा भइरहे पनि यो शुक्रबारभित्र भने कुनै पनि हालतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सत्तारुढ दलका नेताहरुले बताएका छन् ।
उक्त पार्टीले स्थायी कमिटीको घोषणा गरिसकेको छ भने प्रदेश इञ्चार्जहरु पनि तोकेको छ । पार्टीको प्रचार विभागको प्रमुख र प्रवक्ताको जिम्मेवारी जगन्नाथ खतिवडाले पाएका छन् । उनी हाल गृहजिल्ला उदयपुरमा छन् । बुधबार काठमाडौं आएपछि जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका छन् । त्यस्तै, पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय, कार्यालय व्यवस्थापन र अन्य प्राविधिक कामको तयारी पनि भएको स्रोतले जनाएको छ ।